I-Richmond, i-VA • Ukuhlikihla umzimba ne-NuRu Massage
Ungalokothi ube nesithukuthezi eRichmond, VA. Vele ubhukhe ukugcotshwa komzimba noma i-Nuru slide kuma-masseuse okhokhelwayo.
IRichmond iyinhloko-dolobha yeCommonwealth yaseVirginia. Isikhungo seRichmond Metropolitan Statistical Area (MSA) kanye ne-Greater Richmond Region. I-Richmond yafakwa ngo-1742 futhi ibe yidolobha elizimele kusukela ngo-1871. Ngokwezibalo zethu, ama-bodyrubs wenyama kanye ne-nuru massage abanikezeli be-Richmond VA base bevele bekhangisa ngo-1872.
ISIKHATHI ESINGCWELE SOKUVAKASHA Kwangathi kuya ekuqaleni kukaJuni, ngasekupheleni kukaSepthemba kuya kuNovemba
Ukubhucungwa okusha kwe-Asia